शहरको पोर्टल केस्टोकोभोंभो जानकारीका महिलाहरूमा पालेरोजलको डिस्चार्जको कारण के हो?
गर्भावस्था क्यालेन्डरलाई गर्भधारणले मलाई आज 1 15DPU कोर्दछ। मैले सोचे कि यो हिजो हो। बरु अवधारणाबाट + दिन भन्दा बरु, क्यालेन्डरहरू औसत मानिन्छ। "# Phy एक चक्र दिन छैन।:
BAKU व्यक्ति, हाम्रो राज्यको क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको नगद गणनाहरू नगद बनाउन रुचाउँदैनन्। वा, यो रूसमा बोल्ने चलन छ। जे होस्, सांस्कृतिक मानिसहरू हाम्रो शहरमा बस्छन्, जुन उनीहरूको वालेटहरूमा नगद भण्डारण गर्दैन, तर प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड द्वारा गणना गरिन्छ। मैले बहुवचनमा लेखेको छु, किनकि त्यहाँ विभिन्न क्रेडिट र बैंकिंग कम्पनीहरूका केही कार्डहरू छैनन्।
यसको अर्थ आगामी 12-1-18 महिनामा बैंकको infermains महिनामा असर गर्ने बैंकमा ब्याजमा गिरावट आएको छ। म यसमा विश्वस्त छु, केही महिना पछि तपाईले मेरो बैंक खाताहरूमा एक सकारात्मक सन्तुलन देख्नुहुनेछ, र जो नगद प्रयोग गर्छन् - नकारात्मक। तिनीहरू हाम्रो मनमोहकहरू हाम्रो जेबबाट फ्लोट हुनेछन्। त्यसैले यो आवश्यक छ!
सन्देश: 11 113 <
<<। LI> सामाजिक नेटवर्क पृष्ठहरू:
Hermonal contrainest। यी ड्रग्स प्राप्त गर्दा यो सबैभन्दा विशेषता पक्षका संस्थाहरूको एक हो। / LI>
पनि गुलाबी सिल्लाहरूको घटनालाई उत्तेजित गर्नुहोस्। गर्न इन्ट्राटरटरनिर, गर्भनिरोधक प्लास्टर वा अर्डन्ट प्लान्टन्टहरूको साथ। / LI>
यदि तपाइँ एक यौन साथीको साथ एक कार्य पछि pinkepps अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ भने जननेद्रिय मानिससँग सम्पर्कको कारण गर्नाले गर्भाशयको इच्छाको क्षारीत हुन सक्छ। यद्यपि यो तीव्र यौन सम्बन्धका कारण योनीको माइक्रोक्र्याकको नतीजा हुन्छ। / LI>
गुलाबी सिलहरू चक्रको बीचमा चक्रका टुक्राहरूको बारेमा कुरा गर्नु अघि हर्मोनल डाउनटर्नको बारेमा कुरा गर्न सक्दछ। यदि तिनीहरू नियमित रूपमा प्रयोग गरिएका छन् भने, तिनीहरूको संख्या महत्वहीन छ, यसको अर्थ यो ओभिलेशन अवधिको बखत समाप्त हुने हुन सक्छ। यस अवस्थामा, त्यहाँ कुनै समस्या छैन, यस्तो डिस्चार्जको उपस्थिति हो केवल एक ओभलेशन संकेत गर्दछ। / LI>
मापदण्डको दुई वा तीन दिनमा देखा पर्ने गुलाबी विनियोजन मानिन्छ। त्यसोभए तिनीहरू परम्परागत मासिक धर्ममा जान्छन् र यसको अन्त पछि दुई वा तीन दिन जारी राख्नुहोस्।
केहि महिलाहरूमा, सानो मात्रामा गुलाबी श्वेत झिल्ली उदयको बेला देखा पर्दछ। यस अवधिमा भन्ने अवधिमा, हार्मोनल पृष्ठभूमि परिवर्तन गरिएको छ, र एस्ट्रोजेनको उच्च स्तरको कारण, शून्य झिल्लीको सानो अंश अस्वीकार गरियो। / LI>
गुलाबी पृथकहरू अपर्याप्त थाइरोइड गतिविधिको कारण हुन सक्छ। यो दर्दनाक राज्यको कारणले होमनोल पृष्ठभूमि अस्थिर छ भन्ने तथ्यको कारणले गर्दा यो दर्दनाक असफलता हो जुन हार्मोनल असफलताको कारणले विकसित रोग पुर्याउँछ। यसले गम्भीर तनाव पनि निम्त्याउन सक्छ। / LI>
प्रारम्भिक चरणहरूमा गर्भावस्थाको एक संकेत। / LI> :
महिला मूत्र प्रणालीको संरचनाले आफ्नो जीवनमा योनीबाट बिभिन्न प्रकारको डिस्चार्जको डिस्चार्जको डिस्चार्ज हुन सक्छ। तिनीहरू दुबै तरल र कर्लहरू हुन्, फ्ल्याटरमा मुसलका सामानहरू भन्दा फरक हुन्छ, साथै हाइलाइटहरू (जलाशयबाट खैरो-कालो) हुन्छन्।
गुलाबी एक्लोसन सामान्य हुन सक्छ, र रोगजनक हुन सक्छ, यो सबै चयनको प्रकृतिमा निर्भर गर्दछ। यदि चयन एक गैर मानक रंग छ भने, तिनीहरू बाक्लो र प्रशस्त छन्, तब यो एक संकेत हुन सक्छ कि एक महिलाले एक सूक्ष्म संक्रमण गर्न प्रगति गरेको छ।
यदि तपाईंले गैर-मानकहरूको उपस्थिति याद गर्नुभयो र पहिले अवलोकन नगरिएको डिस्चार्जमा, वा यदि कुनै भए पनि स्त्री रोग विशेषज्ञतिर फर्किनु आवश्यक छ, त्यसपछि डाक्टरको परीक्षा गम्भीर परिणामहरू प्राप्त गर्न समय र उपचारमा तिनीहरूलाई देखाउन मद्दत गर्दछ।
गुलाबी स्रावको कारणहरू
यो के हुन सक्छ? यदि तपाईंले याद गर्नुभयो कि गुलाबी रंगको रिलीज मासिक वा चक्रको बीचमा देखा पर्यो भने, यसको मतलब सेतोको सानो रक्तस्राव हुन्छ। र यो तपाईंको स्वास्थ्यको लागि खतरनाक हुन सक्छ।
जब गुलाबी डिस्चार्ज हुन्छ, चक्रको बीचमा वा गर्भावस्थाको बीचमा गुलाबी डिस्चार्ज फेला पर्यो, विशेष गरी जब तिनीहरू पर्चलातमा समर्थित हुन्छन्, र छनौट एक अप्रिय गन्ध छ, तपाइँसँग स्त्री रोग विशेषज्ञको लागि तत्काल अभियानको एक कारण छ। कुनै पनि रोग पहिलेको समयमा उपचार गर्न सजिलो छ।
मसँग weeks हप्ता छ। बर्ट। एक हप्ता अघि फिले-गुलाबी डिस्चार्ज सुरु भयो,2दिनमा बित्यो। त्यहाँ गलत कालो खैरो खतराहरू थिए। राच तोकिएको छ। चिकित्सा। गधा पहिलो ट्याब। विनियोजन समाप्त भयो।2दिन पछि फेरि फिक्का गुलाबी शुरू भयो। केटीहरूलाई थाहा छ कि यो के हो र यो कसरी समाप्त हुन्छ?
यसको अर्थ के हो "पहिलो ट्याब्लेट पछि" तपाईं अब तिनीहरूलाई पिएनन्? यो अन्तको अन्तको अन्त्य हुन सक्छ र बुझ्न सकिने यो खतरा हो। डाक्टर र तुरून्त।
: यदि गर्भावस्था सामान्य छ भने, यो जारी हुनेछ! र यदि भ्रुणमा केहि गलत छ भने, यो अझै अवरोध हुनेछ। र तपाइँ प्रोस्पोरिन पिउनुहुन्न?
अब तपाईले बुझ्नुहुन्न, गुलाबी सिलसले कुनै किसिमको समस्या जस्तै देखिन्छ? म कल्पना पनि गर्दिन कि कस्तो गुलाबी रंगको रिलीज देखिन्छ। कुनै पनि केस यदि त्यहाँ कुनै क्षति छैन भने, यो मलाई लाग्छ त्यहाँ एक मौका छ। तपाईलाई कहिले थाहा हुँदैन कि यो विनियोजनका लागि के हो, तपाईं सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा उठ्नुहुन्न, आराम गर्नुहोस्।
मलाई यस्ता लक्षणहरूको साथ समान अवधिमा र अल्ट्रासाउन्डको नतीजा अस्पताल राखिएको थियो, सबै धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वरले गर्नुभएन। आफैलाई प्रेम गर्नुहोस्, ती सबै ठीक छ:
सँगै, आराम गर्नुहोस् र भिटामिन खान्नुहोस्, र मलाई लाग्छ कि म विश्वास गर्ने क्रमशः न्याय गर्दछु।
<< p> मारिनासँग सहमत हुनुहोस्, गन्तव्यको रूपमा, तर डाक्टरहरूको सल्लाह प्रदर्शन गर्नुहोस्। मेरो प्रेमिका3त्यस्ता लक्षणहरू, र व्यक्तिगत तवरले मेरो लागि, विनियोजन र विकृति2पटकको संकेत हो। र कुनै औषधि सहयोग गरिएको थिएन, सामान्य बी। यो बिना नै थिए। प्रत्येक शरीर यसको मापदण्ड को लागी। तपाईको स्वास्थ्य! बताउनुहोस्, पर्खिनुहोस्, आशा नहटाउनुहोस्।
केटीहरू, बस्नुहोस्, प्लम! अर्को शहरका टिप्पणीहरू आगमन, गर्भावस्था 4--7 हप्ताहरूमा भ्रमण गर्न। हो उचित रिलीज - त्यसपछि गुलाबी, छोइयो, त्यसपछि खैरो, फेरि अपील छ। यो खतरनाक छ? केहि गर्न को लागी केहि? मद्दत गर्नुहोस्, कृपया सल्लाह दिनुहोस्, धेरै कृपया कृपया र चिन्ता गर्नुहोस्!